Aluminum utsotso Furnace, Arc Furnace, Automatic nokuchengetedza - Rongtai
Professional akaigadzira Heating Equipment Products anenge 22 makore. Fekitari Our riri muna WeifangCity, Shandong. Read More
Factory yedu yakura kuva Premier ISO9001: 2008 vanopupurirwa akaigadzira High quality, Cost-Zvinobudirira zvigadzirwa. Read More
Nguva dzose anoisa unhu panzvimbo yokutanga uye zvakasimba atarisire chigadzirwa unhu ose kwacho. Read More
Kwemakore anopfuura 22., Rongtai yave tichifunga kupa yakatsiga uye vakarongeka MF induction kudziyisa michina.
Shandong Rongtai Induction Technology Co., Ltd. hwakagadzwa muna 1997, ari emarudzi yepamusorosoro zvebhizimisi subordinating nyika-kirasi mukuru-magumo michina manufacturer- Himile Group.
Induction yanyunguduka Furnace Aluminum Shell uchanyauka ...
Kubvira pakagadzwa, Rongtai ave vakanamatira kumugwagwa akazvimirira rwokugadzirwa utsanzi uye R & D. It ane boka pamusoro-notch hwokugadzira matarenda ari indasitiri, uye akagadza wepurovhinzi-pamwero rabhoritari, wepurovhinzi-pamwero zvebhizimisi michina centre, munhu matunhu neminisiparati-sandara injiniya tsvakurudza uye kukura pakati. Anomiririra yepamusoro pamwero MF induction michina kumba uye kunze, mubasa amboshandurirwa National vomureza "National Industrial Electric Heating Equipment Standardization Technology", "Medium Frequency Coreless Induction Furnace" uye "Voltage Type Frequency Conversion Multiple Medium Frequency Coreless Induction Vira Complete Set "The pakagadzwa simba rakawanda mitemo rekukuputsirai dzemagetsi yamavira.
Sezvo kiyi chikamu kubva Himile Group, Rongtai Induction Technology vakanyorwa guta mamiriyoni 10 rmb. The mafekitari miviri yokufukidza zvachose nharaunda 137.200 ㎡. Pane 5 ano mumawekishopu ane zvachose nharaunda 46.000 mativi metres, hofisi kwakakwana uye kutsigira zvivako. Chekambani chikuru chigadzirwa kusanganisira svikiro Frequency induction michina uye kutsigira kushandisa michina midziyo, chinoumba zvinhu zviri kumusoro-kuguma induction utsotso chamatare, otomatiki induction kudziyisa chamatare, online richipedza uye tempering kugadzirwa mutsetse, nezvimwewo, kushumira zhinji dzakakwirira-magumo muchini kugadzira emakambani kumba uye kunze.
Field basa ruzivo uye unyanzvi enda ruoko-mu-ruoko
Muna 2003-04, kambani vakagamuchira inokosha Export kuti wedzerai, kugadzwa, pakutuma oparesheni & dzigadziridzwe Drum Mix Asphalt chirimwa pana Dushanbe, Republic of Tajikistan nokuti Airport pabasa.
A inobudirira Execution uye apedza kurongeka ichi akaunza itsva sefungu mberi mune kambani.
Parizvino boka kunakidzwa mukurumbira mukuru Nigeria, Tajikistan, Kazakhstan, Papua New Guinea, Seychelles & Malawi nokuda yakakwirira vakarongeka chigadzirwa uye pashure okutengesa rutsigiro.
Vakazvitsaurira kuna kupa chemhando yepamusoro uye mutengo-vanobudirira dzakawanda unhu MF midziyo nokuda Chinese kumusika, uye anomiririra induction midziyo China kusvikira nyika, kuva nyika-kirasi MF midziyo mugadziri.
Himile Group hwagadzwa muna 1995, riri mu Gaomi City, Shandong Blue Economic Zone. Kwemakore anopfuura 20, kambani kwakasimbiswa nokukurumidza uye zvishoma nezvishoma pane remubatanidzwa wepagore kukura mwero vanoda kusvika 50%. Zvino ane zvinopfuura 30 subsidiaries, kusanganisira mumwe A-mugove dzakanyorwa kambani (wemari yekubvuma 002595), zvina National yepamusorosoro emakambani uye shanu mhiri kwemakungwa nemakambani. Himile ndokwenguva nzvimbo 2.664.000 ㎡, anoshandisa vanhu vanopfuura 10,000 uye ane zvachose yesangano mabhiriyoni 7.6 rmb. Hazvina mukupara michina kugadzira, kumhenderekedzo engineering, njanji dzaifanoiswa, gasi, dzidzo nezvimwe minda.
Induction Metal Melting Oven, Aluminum Shell Medium Frequency Furnace, Melting Furnace Copper, Heat Treatment Induction Furnace, Graphitization Furnace, Mini Melting Furnace,